Al Shabaab Oo Sheegtay in 23 Askari Burundeys ah Ay Ku Dishay Dagaalkii Duleedka Balcad 17 Baabuurna Ay Ku Qabsatay.
Saturday March 03, 2018 - 12:00:33 in Wararka by Super Admin
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu faah faahiyay dagaal culus oo shalay gelinkii hore ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe.
Sawirro lagu baahiyay Baraha Bulshada ayaa muujinayay khasaraha AMISOM kasoo gaaray dagaalkii sh/dhexe
Al Shabaab waxay sheegtay in weerarka oo aad u xooganaa lagu dilay ugu yaraan 23 Askari Burundeys ah islamarkaana tira kale lagu dhaawacay.
"Holwgalkii Mujaahidiintu shalay ka fuliyeen wilaayada Shabeelaha dhexe waxaa lagu dilay 23 Askari oo katirsan Kufaarta Burundi, sidoo kale mujaahidiintu waxay qaniimeysteen 17 gaari oo saliibiyiinta laga furtay" ayaa lagu yiri war kooban oo kasoo baxay Al Shabaab.
Warka kasoo baxay Mujaahidiinta ayaa lagu xaqiijiyay in gaadiid dagaal iyo kuwa xamuulka ah oo gaaraya 17 ay ku qabsadeen weerarkii aadka u xooganaa ee ka dhacay wadada xiriirisa degmooyinka Balcad iyo Jowhar.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in Meydadka ciidamada Burundi ay ku fifireen wadada hareeraheeda waxaana la arkayay diyaaradaha qumaatiga ukaca oo dul heehaabaya goobtii dagaalku ka dhacay waxaana la sheegay ay baadi goobayaan Meydad iyo dhaawacyo.
Waa Khasaarihii ugu xoogganaa oo ciidamada shisheeyaha AMISOM lagu gaarsiiyo gobolka Sh/dhexe, dowladda Burundi ayaa dhankeeda qiratay in 5 askari looga dilay dagaalkii shalay.